Mpivarotra amoron-dalana eny Ampasampito Tsy maintsy hesorina
Mikolay amin’ny ataon’ireo mpivarotra amoron-dalana tsy ara-dalàna eny Ampasampito ny ankamaroan’ireo taksibe sy olona mivezivezy eny an-toerana.
Alohan’ny amin’ny 8 ora maraina mantsy dia efa feno azy ireo ny lalana ka voatery mandeha eny afovoan’ny arabe ny mpandeha an-tongotra. Mitohy amin’ny 4 ora hariva ka hatramin’ny 8 ora alina indray izany. Raha araka ny fanazavan’Atoa Rakotobe Richard, delegen’ny Boriborintany fahadimy omaly dia manararaotra ny tsy fahafahan’ireo olona ampiasain’ny boriborintany hanara-maso azy ireo, ireo mpivarotra tsy ara-dalàna. Voairaka manadio tata-drano any amin’ireo Boriborintany namana hafa avokoa mantsy ireo mpanara-maso ireo izay nohamafisiny fa tsy maintsy hiverina. Amin’izay fotoana izay hoy izy dia tsy hisy hanelingelina ireo mpandeha an-tongotra sy taksibe intsony ireto mpivarotra amoron-dalana tsy ara-dalàna ireto.